Network places တွင် computer တစ်လုံးရှိ CD/DVD ခွေကိုတစ်ခြား computer တွင် install လုပ်ခြင်း - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Network places တွင် computer တစ်လုံးရှိ CD/DVD ခွေကိုတစ်ခြား computer တွင် install လုပ်ခြင်း
Network places တွင် computer တစ်လုံးရှိ CD/DVD ခွေကိုတစ်ခြား computer တွ)
ရှိပြီးသားလားမသိဘူးခင်ဗျာ......ကျွန်တော်လိုက်ရှာသေးပါတယ်.......မတွေ့ လို့ ရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်......
ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်အကြောင်းကတော့.........Network places ရှိ computer တစ်လုံးရှိ CD ROM မှ
CD ခွေကို တစ်ခြား computer တွင် Install လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်......ဒီနည်းလေးကိုသိပြီးသားဖြစ်တဲ့
မှရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်......ဒီနည်းလေးက CD/DVD-ROM မကောင်းသောညီအစ်ကိုမောင်
၁။ computer ၂ လုံးသည် Network place တစ်ခုတည်းတွင်ရှိရပါမည်(Local Area network တွင်
Workgroup name မတူလည်း ရပါသည်)
၂။ computer ၂ လုံး၏ Workgroup name တူရမည်(Wireless Area Network တွင်ဖြစ်သည်)
ကျွန်တော်အခု computer(A) နဲ့computer(B) ဆိုပြီးထားပါ့မယ်.......computer(A) ၏ CD Drive တွင်ထည့်ထားသော Driver CD ကို computer(B) မှာ Run မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.......
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ........computer ၂ လုံးလုံးရဲ့Workgroup name ကိုစစ်ပါ့မယ်ခင်ဗျာ........
Start==>My computer (right click)==>Properties==>Computer Name tab ကိုသွားလိုက်ရင်အောက်ကလိုလေးတွေ့ ပါလိမ့်မယ်....ကျွန်တော်အခုလုပ်မှာက Local Area Network အတွင်းမှာဖြစ်လို့ မတူလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးခင်ဗျာ.....Workgroup name ပြောင်းချင်ရင်တော့
အဲဒီမှာ change ဆိုတာကိုသွားပြီးတော့ ပြောင်းလို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ......
ကျွန်တော် computer(A) ကိုဖွင့်ပြီးတော့ CD/DVD RAM ကို Share လုပ်ပါမယ်.....ကျွန်တော့်စက်မှာ Partiton ၆ ခုရှိတဲ့အတွက် DVD RAM က DVD RAM Drive(I) ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ......share ဖို့ ဆိုရင် Drive ပေါ်မှာ Right click==>Sharing and security ကိုသွားလိုက်ရင် အောက်ကပုံလေးလိုတွေ့ ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ......
အဲဒီမှာကျွန်တော်အနီနဲ့ ဝိုင်းထားတဲ့ နေရာကို နှိပ်လိုက်ရင်.....အောက်ကပုံလိုလေးတွေ့ ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ.......အောက်ကပုံမှာ အနီနဲ့ ဝိုင်းထားတဲ့ Share this folder on the network ဆိုတဲ့ ရှေ့ မှာ click ပေးလိုက်ပါ.......ပြီးရင် Apply ...ပြီးရင် Ok ပေါ့နော်.....
computer(A) မှာ share လုပ်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်..........ကျွန်တော်တို့ အခု computer(B) မှာ computer(A) ရဲ့LAN နံပါတ်ထည့်ပြီးတော့.......ဆွဲကြည့်လိုက်ပါမယ်........ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတာဟာ Local Area Network အတွင်းမှာရှိတဲ့ computer ၂ လုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.......computer(B) မှာဆွဲလိုက်ရင်အောက်ကလိုပုံလေးတွေ့ ပါမယ်........အဲဒီမှာထဲမှာကျွန်တော်တို့computer(A) မှာတုန်းက DVD Drive က I ဖြစ်တဲ့အတွက်အခု share folder ပေါ်လာတော့ I ဆိုတဲ့ folder လေးတွေ့ ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ........
ကဲဒါဆိုရင်တော့စပြီးတော့လုပ်လို့ ရပါပြီခင်ဗျာ........ကျွန်တော်အခု computer(A) ရဲ့ စက်ထဲမှာ sound card driver ခွေထည့်ပြီးတော့ computer(B) မှာ LAN ကနေဆွဲပြီးတော့ I folder လေးကို ဖွင့်လိုက်ရင် အောက်ကပုံလိုလေးတွေ့ ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ..........ဒါဆိုရင်တော့ စပြီးတော့ Run လို့ ရသွားပါပြီခင်ဗျာ.........
အခုကျွန်တော့်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာ.......ကျွန်တော့်ရဲ့ တင်ပြချက်မှာ အမှားအယွင်းများရှိနေပါက ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....ကျွန်တော် Wireless Area Network တွင်မစမ်းသပ်ဘူးသေးပါခင်ဗျာ.......စမ်းသပ်ပြီးသောညီအစ်ကိုများအဆင်ပြေမပြေပြန်ပြောနိုင်ပါတယ်ခင်
အောက်ပါအသင်းဝင် 38 ဦးတို့မှ ဆန်းမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ကိုဦး, ဂတုံးလေး, နီလာချစ်သူ, ဖယောင်း, မျိုးဟန်ထက်, ရဲရဲလေး, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းသူအောင်, ကျော်ထက်ချိန်, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, သေးသေးလေး, မြင့်မိုရ်, aungphyo, AZM, bonge, htun30, htweko, kozaw.dagon, kyaukphyu, KznT, Lwin Thu, mickelnge, minthumon, muanthang92, naung252, openeyes, phyomyintthein, sawlinux, soehtetpaing, themoon49, thureinsoe, tu tu, tunlay86, yawnathan, zan zan, zo
22-06-2010, 04:53 PM
ပြန်စာ - Network places တွင် computer တစ်လုံးရှိ CD/DVD ခွေကိုတစ်ြ(
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ နောက်ထပ်အများကြီးလေ့လာနိုင်ပါစေ ခင်ဗျာ နောက်ထပ်လဲပညာတွေကိုအများကြီးဝေဌနိုင်ပါစေခင်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ chitsanmg19 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ရဲရဲလေး, သေးသေးလေး, openeyes, thureinsoe, zan zan
ကောင်းပါတယ် အကိုရာ ညီလေး လာဖတ်ကြည့်ပီးပါပီ အကိုတော်တော် လေးကိုပြီးပြည့်စုံပါတယ်ရေးထားတာအကို့ ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်လည်းရေးသားပေးပါဦးလို့ အကြံပြုပါရစေ အကိုရေ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ရဲရဲလေး, သေးသေးလေး, thureinsoe
26-06-2010, 05:38 AM
ဒါနဲ့မသိလို့မေးပါရစေဗျာ ဒီလိုနည်းနဲ့ဝင်းဒိုးရော တင်လို့ရပါသလား
၀င်းဒိုးေ။ရာ တင်လို့ ရလား ပြောပြပါဦး
အကို အမ တို့ရေ ......................
ဖိုးကောက်လေးနဲ့ နေဦးသစ်ရေ.........ဒီနည်းလေးနဲ့ဝင်းဒိုးတော့ တင်လို့ ရမယ်မထင်ဘူးဗျာ........ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ဒီနည်းက ၀င်းဒိုးပေၞမှာပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်......ကျွန်တော်အထင်လေးကိုပြောတာပါ.......ကျွန်တော်ဝင်းဒိုးတော့ မတင်ကြည့်ပါဘူးခင်ဗျာ.......တစ်ခြားကွန်ပျူတာကနေ ၀င်းဒိုးတင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကို spaceboy ရှင်းပြထားပါတယ်..........Network ပေါ်မှတဆင့် Windows တင်ခြင်း ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပါ..........ဒီအောက်ကလင့်လေးမှာသွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ...........
AZM, htun30, muanthang92, tunlay86
Originally Posted by ဆန်းမောင်
Last edited by KznT; 03-12-2010 at 06:14 PM.. Reason: Quote ပြင်ဆင်ရန်
ပို့စ် 27 ခုအတွက် 69 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဟုတ်..ကောင်းပါတယ်.. သိတာလေးများရှိရင်..တင်ပေးပါဦး..နောက်ထက်.. network ပတ်သက်တာတွေဆို လေ့လာချင်လိုပါ..
Find More Posts by lynnlynn1500
ကောင်းပါတယ် အစ်ကို ရေ.. တစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ် Window ကော တင်လို့ရလား ဆိုတာကို လည်းပြောပြပေးပါလား... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
network ကနေ ၀င်းဒိုး တင်တာကို အောက်ကလင့်မှာ ဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ..
နေမင်းမောင်, မောင်ပေါ်ဦး, bagothar85, g00gle, KznT, Lwin Thu, minthike, minthumon
29-06-2011, 04:42 AM
ဆိုပြီး user name နဲ့
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ khaing king အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
User name နဲ့ password ပေးမထားရင် connect ကိုတစ်ခုထည့်နှိပ်လိုက်ရင်ရပါတယ် ကျွန်တော်တို့လည်းအဲဒီလိုပေါ်တာပါပဲ......
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဦးသာကြီး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ. သိရင်ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. TCP/IP Configuration (IP Address ပေးတဲ့နေရာ) မှာ Password ပေးနည်းလေးသိချင်လို့ပါခင်ဗျာ.
networking guide, networking howto, networking knowledge, windows guide, windows howto, windows knowledge